galmudugnews.com » Gudoomiye Cabdi Shukri Cali Jiinjo oo talo iyo baaq ujeediyay bulshada Galmudug
Home » WARARKA » Gudoomiye Cabdi Shukri Cali Jiinjo oo talo iyo baaq ujeediyay bulshada Galmudug Gudoomiye Cabdi Shukri Cali Jiinjo oo talo iyo baaq ujeediyay bulshada Galmudug galmudug on
No Comment Views 164845KU: MAAMULKA IYO BULSHADA GALMUDUG
UJEEDO: BAAQ AYIDAAD IYO TALO
Waxaan halkaan aan baaq ayidaad iyo talo hambaarsan aan udiraya Maamulka iyo Bulshada Galmudug dibedda iyo gudaha dalka ku sugan.
Markaan fiirinay marxalada ay Soomaliya ku sugan tahay oo ah in ay isku soo aadeen doorashada Dawlada KMG ah iyo tan Galmudug.
Waxaa markaas noo soo baxday in aan ayidno talada kasoo baxday Madaxweyne Caalin iyo Gudoomiye Ku xigeenka baarlamaanka Galmudug Mudane Cawke Sheikh Cabdiraxmaan oo ay kudhawaaqeen in ay Dawlada Galmudug ee hadda jirta ee waqtigeeda ku eg yahay bisha labaad ee sanadka cusub, doorashada madaxtinimada Galmudug waqtigaas laqabto.
Sidaasna waxaan u aragnay in ay sax tahay in la qaadano talada Madaxweyne Caalin oo kala reebeyso doorashada Dawlada KMG ah iyo tan Galmudug. Arrinkaan waxay fursad noo siineysa in aan si buuxda aan uga wada qeybgalno doorashada Dawlada KMG ah marka hore oo dhacaysa bisha Sideedaad kabacdina sidoo kale aan kawada qeybgalno tan Galmudug bisha Labaad.
Macquul ma ahan in aan isku mar aan kawada qeyb galno laba doorasho oo labadaba bulshada Galmudug ay qeyma weyn uleedahay ka qeybgalkooda. Sidaa daraadeed waa in la kala qaada labada doorasho oo mida weliba mida Galmudug dib loo dhigo maadama beesha caalamka iyo Soomalidaba ay diideen in waqtiga loo kordhiyo wixi ka dambeeya bisha sideedaad.
Waxaan marka talo u soo jeedinaya Maamulka iyo Bulshada Galmudug ay in taas gartaan oona qaataan talada ah in lakala qaado labada doorasho oo isku soo aaday.
Waxaan baaq udiraya dadka jecel in isku soo taagaan xilka Madaxtinimada Galmudug in ay ogolaadaan in dib loo dhogo dooroshada Galmudug si loo helo fursad ay bulshada Galmudug si buuxda uga qeybgalaan doorashada TFG kabacdina tooda Galmudug ay dib ugu soo laabtaan ayagoo waqti helay.
Waxaan u habalyeynaya Dawlada Galmudug wax qabad keeda iyo hormarka ay ka sameeysey gudaha iyo dibedda Soomaliya,
Cabdishukri Cali Xirsi.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139417 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31881 hitsContact US - 30574 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26141 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25637 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25259 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23898 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23031 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22364 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22342 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21445 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21114 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21107 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20803 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19869 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19863 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19247 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18496 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17804 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17721 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17677 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16902 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16816 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15535 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15471 hits Home Contact US